Rafitra fandatsahana ho an'ny seranan-tsambo, seranan-tsambo sy lalan-drano - Ellicott Dredges
Ny Dredges dia miasa amin'ny fitazomana ny seranan-tsambo, ny seranan-tsambo ary ny làlan-drano misy malalaka ary tsy misy masoka. Ny fitaterana ny mpandeha sy ny fitaovana amin'ny rano dia safidy azo tanterahina amin'ny varotra. Rehefa mitombo ny isan'ny olona manerantany dia hisy fangatahana avo kokoa noho ny lozika azo antoka sy eknika ary azo tanterahina mandritra ny taona maro ho avy.
Ny fantsom-baravaraman-jaza kely sy antonony any Ellicott dia mety tsara amin'ny fitazomana ny seranana, seranan-tsambo ary lalan-drano misy azy na inona na inona toetrandro sy ny manodidina.
Ny fitomboan'ny varotra iraisam-pirenena dia mitombo amin'ny fitaterana an-dranomasina, izay ahitana ny fidirana amin'ny lakandrano izay voatahiry tsara dia zava-dehibe amin'ny orinasa manerantany. Raha mihena ny lakandrano dia mijanona tanteraka ny sambo sy ny barazy.
Ny Ellisott Swinging tohatra fiakarana dia natao am-pahamehana mba hiasa amin'ny fantsona kely sy lakandrano. Ireny dredges azo itokisana ireny dia tsy mitaky tariby sy vatofantsika miasa ary noho izany dia afaka manohy miasa satria ny sambo hafa kosa dia mihetsika malalaka mandritry ny lakandrano misy fanelanelanana kely.
Ny fanondranana renirano no fahita fahita fahita indrindra amin'ny fitaovana fantsakan-damba an'i Ellicott. Ireo tetikasa ireo dia mety miovaova amin'ny tanjona sy halehibeazana. Ellicott® dia manolotra karazan-javamaniry antonony ho an'ny tsirairay amin'ireo tarehin-javatra manokana ireo. Ireo tetik'asa fanondrahana renirano dia natao hanaraha-maso ny halalin'ny fantsona, manome ny fanalefahana ny tondra-drano, manala ireo fitaovana voaloto, manalavitra ny fantsom-baravarankely, ary manohana ny ezaka momba ny tontolo iainana.
Fiarahamonina izay manamorona ny renirano dia mora tondra-drano isan-taona mandritra ny fotoanan'ny orana. Raha toa ny renirano dia tsy mavitrika mitantana azy, ny fasika sy ny serivisy dia afaka manangona sy mamorona bottleneck. Raha misy ny orana lehibe dia misy fika miparitaka dia afaka mametra ny fikorianan'ny rano, ary mety hiakatra mihoatra ny morony ny renirano ary ny tondradrano ao amin'ny faritra akaiky.
Ny famoronan'ny kamio ao Ellicott dia mamela ny governemanta sy ny mpiandraikitra eo an-toerana hametraka haingana ny diany mankany amin'ny toerana rehetra mba hamerenany haingana ny fantsona mankany amin'ny halalin'ny fantsom-pandrenesana sy ny hidiran'ny hydraulic. Rehefa vita ny tetikasa dia afaka mivezivezy mora foana ny seranam-piaramanidina enta-mihetsika ary hotehirizina eny an-toerana raha tsy ilaina amin'ny tetik'asa manaraka.
Mianara bebe kokoa momba ny fanondrahana renirano.
Ny fanamboarana sediment dia loharano olana izay miteraka olana lalina sy kalitaon'ny rano ho an'ny farihy organika sy vita amin'ny olombelona. Ny fananganana sediment dia mety hisy fiantraikany amin'ny hetsika fialamboly sy ny fiainana an-dranomasina. Ankoatr'izay, ny fihazakazahana avy amin'ny fivoarana akaiky na tetikasa fananganana dia mety handoto ny rano ao amin'ny farihy iray koa.
Raha tsy misy ny fanodinana tsy tapaka tsy miato, ny fananan'ny farihy dia mety mihena raha toa ka mihena ny fidirana amin'ny tohodrano ary mihamangatsiaka ny rano mazava. Rehefa miakatra farihy ny rongony sy ny otrikaina dia mety maintso be ny valiny, ary miorina ny alàka - taty aoriana dia nitarika fanjifana sy famonoana ny trondro ao an-toerana noho ny hypoxia na tsy fisian'ny oxygen. Ny fisorohana fandotoana dia afaka misoroka ny eutrophication ary mety hanodina ny fizotrany ihany koa amin'ny ankamaroan'ny tranga.
Ny dredge Ellicott dia namboarina hitantanana ny halalin'ny farihy sy ny fanadiovana ny loto. Mitaky ny fangatahana serivisy fanondrahana farihy manerana an'izao tontolo izao satria miverina amin'ny laoniny ny farihy ny tanàna ho an'ny fizahan-tany sy ny mpamorona manorina ny morontsiraka.
Mianara bebe kokoa momba ny lemaka amin'ny farihy.
Ny fitazonana ny fantsom-pifandraisana ho any amin'ny seranan-tsambo misokatra na famoronana trano vaovao dia mahasoa ny toe-karena eo an-toerana amin'ny ambaratonga maro. Ny fanamboarana tsy tapaka matetika dia ahafahan'ny sambo afaka mivoaka malalaka sy miala amin'ireo andalana ireo raha tsy misy olana. Ny fanangam-bolo, fasika, ary fametahana hafa dia mitondra any anaty sambo mandeha, fihodinam-borona, simba, olana momba ny fitetezana. Ireo tetik'asa fanamboarana fandotoana no fomba tsara indrindra hitazonana ny halalin'ny fantsona.
Ny fikojakojana ny halalin'ny marina, na tsy miankina na ho an'ny daholobe dia tena ilaina amin'ny fiarovana ny sambo patron amin'ny fahasimbana. Ny fanamboarana tsy tapaka dia manome antoka fa afaka miditra malalaka sy mivoaka ireo andalana ireo ireo sambokely raha tsy misy olana. Ny fitazonana ny marina dia mahasoa ny orinasa sy ny tontolo iainana avy amin'ny toerana misy ny fanodinana.
Ny fanamboarana plastika, fasika, ary fametahana amin'ny seranan-tsambo dia mitarika sambo mandeha anaty lalantsara, simba simba, olana momba ny fanamoriana ary very asa mankany marinas. Raha ny marina dia tokony ho voadion'ny farafahakeliny indray mandeha isan-taona isaky ny roa taona, dia milaza ny fitsipi-pitondran-tena fa manombana ara-bola kokoa ny fananana sy manodina dredge fa tsy manakarama mpifaninana.
Ianaro bebe kokoa momba ny marina dredging.
Ahoana ny fomba fanondranana ny reniranon'i Salado hamonjy Buenos Aires
Mampivoatra ny toekarena ny fofona ao Venezoeliana
Mampiasa ny marika Ellicott® marika ho an'ny asa aostraliana avaratra